सकेसम्म यी यस्ता व्यवहार भएकी युवतीसँग विवाह नगरेकै राम्रो,विवाह पछि समस्या आउन सक्छ
मान्छे जो सुकैले एउटा सपनाको पछाडी लागिरहेको हुन्छ। हुर्कदै बढ्दै जादा सानो परिवार सुखी खुसि परिवारको सपना बुनेको हुन्छ। त्यसैलाई टेकेर विवाह बन्धनमा बढिने गर्छन । तर,गलत मान्छेको हातमा परियो भने जिन्दगि बर्बाद हुन् पुग्छ । त्यसैले विवाह पुर्व हरेको कुराहर सोच्नु पर्छ । विवाह पश्चात जिम्मेवारीलाई उठाउनु सक्नु पर्छ ।
विवाह बन्धनमा बाधिन अघि यी यस्ता कुराहरु थाहा पाईराखेको राम्रो :
१. पारिवारिक नातामा गाँसिएका युवती: आफ्नो परिवारको कुनै पनि नाता गाँसिएका वा सहगोत्री युवती सँग बिहे गर्दा ठूलो अनिष्ठ हुने कुरा विष्णु पुरुणमा उल्लेख भएको छ भने यसलाई विज्ञानले समेत गलत कार्य मानेको छ। हिन्दू धर्मका अनुसार आफ्नो कुनैपनि नाताबाट सात पुस्त काटेपछि मात्र बिवाह गर्न उचित हुनेछ।
२. खराब पुरुषसँग सम्बन्ध राखेकी महिला : यदि बिवाह अगाडी अन्य खराब पुरुषसँग सम्बन्धमा रहेकी महिला बिहे गर्न नहुने कुरा समेत विष्णु पुरणमा बताइएको छ। यस्ता महिलाहरु बिहे गर्दा जीवनमा धेरै दुख कष्ट खेप्नु पर्ने र जीवनमा सफलता हँसिल गर्न नसकिने हुँदा यसमा पहिलेनै जानकार रहन आवश्यक हुन्छ।
३. अल्छि स्वभावका महिला : अल्छि स्वोभावका युवतीहरुले आफ्ना परिवार , आफन्तजनको आदर सम्मान गर्न नसक्ने र घरको इज्जत सम्म धन्न नसक्ने कुरा विष्णु पुरणमा बताइएको छ। महिलाहरु सधैंब मेहेनती र फुर्तिलो स्वभावको हुनुपर्छ। यी स्वभाव भएका महिलाहरुले घरको सेहार सम्भारमा समेत ध्यान नदिने हुँदा लक्ष्मीको श्राप मिल्ने र आर्थिक संकटले घेर्ने गर्छ।
४. छुद्र तथा खराब बोली भएका महिला : प्राय महिलाहरुको मिठो र नरम बोली बोल्ने भएपनि केहि महिलाहरुको खराब हुने गरेको देख्न सकिन्छ। सरस्वतीलाई बाणीकी देवी पनि भनिन्छ र मिठो बोली बोल्ने स्त्रीसँग सरस्वती सँधै प्रसन्न हुने कुरा पनि पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। खराब वा असभ्य भाषा बोल्ने महिलाहरुले घरमा अशान्तिको वातावारण सिर्जना गर्ने र झैँ-झगडा गर्न समेत तयार रहने हुँदा यस्ता महिलाहरुको बारेमा बिवाह अगावै सचेत रहन आवश्यक हुन्छ।
यसरी बनाउनुहाेस् घरमै चिकेनको मिठो अचार